Fizarana ao amin'ny Androidsis
Ao amin'ny Androidsis dia ho afaka hitazona ny vaovao rehetra momba ny tontolon'ny Android ianao. Ao amin'ireo fizarana isan-karazany ao amin'ny tranonkala dia azonao atao ny mamaky momba ny lalao na ny fampiharana apetraka amin'ny Android. Aza hadino koa ny manaraka ny telefaona farany, finday na tablette na smartwatch tonga any amin'ny magazay, ary ny fandalinana ireo maodely malaza indrindra amin'ity fizarana ity.
Tsy azonao adino ihany koa ireo fampianarana sy fika ao amin'ny Androidsis, izay ahafahanao mampiasa telefaona Android na fampiharana amin'ny fomba mahomby kokoa, miaraka amin'ny fiononana lehibe.
Raha fintinina, mba hampahafantarina anao foana momba izay mitranga amin'ny Android, Androidsis no tranokala fanovozanao. Etsy ambany no ahitanao ny fizarana rehetra izay an'ny ekipa fanonta havaozina isan'andro: